Manchester United Iyo Chelsea Oo Ku Dagaalamaya Saxiixa Jadon Sancho Xagaagan
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Manchester United iyo Chelsea oo ku dagaalamaya saxiixa Jadon Sancho xagaagan
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay kula dagaalameyso Chelsea saxiixa xidiga Borussia Dortmund ee Yaadoon Sancho inta lagu guda jiro xagaagan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
20 jirkaan ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Old Trafford sanadkii hore, laakiin Red Devils looma maleynin inay diyaar u yihiin inay la kulmaan BVB £ 108m oo lagu doonayo xidigan.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa sheegeysa in Sancho lagu heli karo xagaagan lacag dhan £ 88m, iyadoo kooxda reer Jarmal lagu qasbay inay hoos u dhigto qiimaha ay ku dooneyso xaalada haatan jirta awgeed.
Sida laga soo xigtay SPORT1 , Dortmund ayaa rajeyneysa in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England inuu ka tago kooxda ka hor xilli ciyaareedka 2021-22, waxaana United iyo Chelsea ay si aad ah u baadi goobayaan saxiixiisa.
Sancho ayay ku adkaatay inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa heer kooxeed xilli ciyaareedkan laakiin wali wuxuu dhaliyay sideed gool iyo 13 caawin 25 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Ciyaaryahankii hore ee Manchester City ayaa qandaraas kula jira kooxda Signal Iduna Park ilaa June 2023.
Previous articlePep Guardiola oo ka hadlay Waxa uu ka filan karo Kooxda Liverpool
Next articleImmisa isbuuc ayuu maqnaan doonaa sergio Ramos.